IiVenkile ezininzi zeApple ziphelile kwisitokhwe se-iMac ezingama-21,5-intshi iMac | Ndisuka mac
NgoLwesibini olandelayo sinayo entsha ganeko I-Apple ebonakalayo. Ukusukela ngo-Novemba, iMac mini kunye neMacBook ezininzi zexesha elitsha le-Apple Silicon bezikho kwintengiso. Ekuphela kwento engekhoyo yokugcwalisa ikhathalogu yidesktop ye-Mac eneprosesa yeM1. Kwaye ngoku, iiVenkile zeApple ziphelelwe yi-21,5-intshi iMac.
Ayithathi Ming-Chi Kuo Ukubopha ezi ziphelo, kunye nokukwazi ukuqikelela ngamathuba aphezulu okuba ulungile ukuba uFederighi okanye omnye woogxa bakhe uza kusibonisa ngo-Epreli 20, emva kwentsimbi yesixhenxe emva kwemini ngexesha laseSpain, iMac entsha eneprosesa ye-ARM.
Lonke uluhlu lweenketho ze-iMac ezingama-21,5-intshi zihlangabezana nokwehla ukubakho kwiiVenkile zeApple kwihlabathi liphela, kunye nemihla yokuhanjiswa kweeodolo ezikwi-Intanethi zezona zikhetho zisisiseko ngaphezulu kweveki.
Uninzi lweeVenkile zeApple njengangoku zinayo IMac esemgangathweni engama-21,5-intshi njengoko ingafumaneki ukuze ithengwe kwangoko. Ukucwangciswa okuphezulu kunye ne-16GB ye-RAM kunye ne-1TB yokugcina iFusion Drive okwangoku ayifumaneki kwiipopu zangoko, ngamanye amaxesha amade akhokelayo. Nokuba kwenzeka ntoni, iApple ineentsuku ezintlanu ukuya kwezisixhenxe zomsebenzi wokugcina ivenkile. Oku kuthetha ukuba abasenazo iimpahla ezikhoyo ezivenkileni.
I-iMac ephezulu ye-21,5-intshi ephezulu ene-4K isibonisi ikwafumana ukungabikho kokufumaneka kwezinye iivenkile; Nangona kunjalo, kuninzi lweeVenkile zeApple zihlala kwisitokhwe. Eyona iMac inkulu nge-intshi ezingama-27 isekhona njengesiqhelo, ngaphandle kwengxaki nakuluphi na uqwalaselo.
Kwinyanga ephelileyo sazisa loo apile yayinayo iyekile Ukucwangciswa kabini kwe-iMac esemgangathweni engama-21,5-intshi. I-Apple inamahemuhemu okuba isebenza kuyilo olutsha lwe-21,5-intshi okanye i-intshi ezingama-24 "encinci" yeMac ukwandisa umnikelo we-Apple Silicon, kodwa nokuba iya kutyhilwa ngoLwesibini ayaziwa. Yonke into ibonisa ukuba kunjalo.
Kule veki izayo, ngolwe-Lwesibini ku-Epreli 20, u-Apple uzakubamba umsitho "weNtwasahlobo eLayishiwe" apho kulindeleke ukuba kubhengezwe iPad Pro entsha. NgoLwesibini siza kushiya amathandabuzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » IiVenkile ezininzi zeApple ziphumile kwisitokhwe se-iMac ezingama-21,5-intshi